DEG DEG:Dagaalkii Tukaraq ee Puntland & Somaliland oo sii xoogaystay + Maxaabiistii ugu badnayd oo laga qabtay Ciidamada….. – Puntland News.net
Home 2018 January 13 Puntland News, Somali News DEG DEG:Dagaalkii Tukaraq ee Puntland & Somaliland oo sii xoogaystay + Maxaabiistii ugu badnayd oo laga qabtay Ciidamada…..
Wararka Warsidaha Puntlandnews.net uu ka helayo dagaalkii dhex maray ciidamada Puntland iyo Somaliland ee deegaanka Tukaraq ayaa sheegaya in maxaabiistii ugu badnayd lagu qabtay dagaalkaasi sida ay sheegeen qaar kamid ah saraakiisha ciidamadu.
Saraakiisha ciidamada maamulka Somaliland ayaa sheegay in 25 Maxbuus oo kamid ah ciidamada Puntland ay gacanta ku dhigeen sida uu xusay Korneyl Mahad Cambaashe taliyaha qaybta 7-aad ee ciidamada maamulka Somaliland oo warbaahinta kula hadlay gudaha deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
Taliyuhu waxa kale oo uu xusay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen ay yihiin dhalinyaro lasoo khalday isla markaasna ay dhaqan celin ku samayn doonaan sida uu yidhi “Waxaan gacanta ku dhignay 25 Maxbuus oo ahaa dhalinyaro lasoo khalday oo la sheegay in ay ka tirsanaayeen ciidamada maamulka Puntland deegaanka aan qabsanayn waa deegaan ka tirsan Somaliland sidaas oo ay tahay kuma khaldanin la wareegista deegaanka Tukaraq, dhalinyaradaasna dhaqan celin baan ku samaynaynaa”.
Marka laga yimaado sheegashada saraakiisha ciidamada maamulka Somaliland ay sheegayaan in ay gacanta ku dhigeen 25 Maxbuus oo kamid ah ciidamada maamulka Somaliland ayaa waxaan arintaasi ka hadlin saraakiisha ciidamada Puntland, waxaana si dhab ah loo ogeyn warka kasoo baxay saraakiisha ciidamada Somaliland maadaama aan la hayn warar madax banaan oo cadaynaya gacan ku dhigista ciidamadaasi.
Ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa hada isku hor fadhiya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, waxaana xaalada oo haatan degan jira saan saan colaadeed oo aad u xoogan taas oo sababi karta dagaal mar kale ka dhaca deegaankaasi.
Wararka Warsidaha Puntlandnews.net – Laascaanood
Filed in: Puntland News, Somali News